Uyifumana njani intombi oyintombazana kwiSikolo esiPhakathi - Ubudlelwane
Ukuqala isikolo esiphakathiyinto entsha enomdla. Uya kwenza abahlobo abatsha kwaye udibane namantombazana amaninzi. Mhlawumbi ujonge umntu kwaye ungathandamenze intombi yakho. Thatha inyathelo ngenyathelo kwaye ngaphambi kokuba uyazi, uya kuyibona indlela okhetheke ngayo, naye. Isenokuba sisiqalo sothando olukhulu, okanye mhlawumbi ubuhlobo obukhulu, kodwa ngokuqinisekileyo uyokuma ngaphandle kwabanye abafana abalingana nawe.
Inyathelo lokuQala: Qaphela
Awunakufumana intombazana ukuba ayazi ukuba ukhona. Yiba ngabom kwaye uyile, kwaye ngaphambi kokuba uyazi, uya kuyithathela ingqalelo.
Iinkonzo kunye neengozi zokuDibana kwiSikolo esiPhakathi
Kubalulekile ukuba nguwe xa uzama ukufumana intombi. Ukuba awunyanisekanga malunga nokuba ungubani, ekugqibeleni uya kuyibona loo nto kwaye uya kwenzakala ukuba umxokisile. Kwaye awuyifuni intombazana engakuthandi okwenyani, andithi?
iziselo uku-oda ebharini
Qhubeka usenza imisebenzi osele uyithanda. Ukuba awuyithandi imidlalo, musa ukuzenza ngathi udlala umdlalo kuba intombazana iyazithanda iijoksi.
Bambelela kwimilinganiselo yokuziphatha nakwinkolelo yakho. Sukutshintsha inkqubo yakho yenkolelo ukutsala umdla womnye umntu.
Ukuba utshintsha ngokupheleleyo ukuba ungubani ukuze ufumane intombi, uya kuba nzima ukukuhlonipha. Unokufumana ngokunganyaniseki. Kwakhona, ukuhlala kwindawo yakho yokuthuthuzela kuya kukunceda ukuba uphephe ezo meko zinzima apho ubeka khona unyawo lwakho kude kube ngoku emlonyeni wakho ongasoze uphinde ulukhuphe.
Enye yezona zinto zibalulekileyo zokwenza ukuba intombazana ikuqaphele kukumazi. Ukuba uyamqonda ukuba ungubani kwaye umazise ukuba uyambona ngaphakathi, uya kutsaleleka kuwe.
Fumanisa ukuba zeziphi izinto zokuzonwabisa anazo uze umbuze ngazo.
Mamela ngenenexa ethetha. Sukunqwala nje ngentloko kwaye ucinge ngento yokutya ozoyifumana xa ubuya esikolweni. Mphulaphule kwaye uncedise kwincoko apho unokufumana khona ingxelo okanye umbuzo.
Buza malunga nosapho lwakhe. Ukwazi ukuba unabantakwabo, uhlala nabazali bakhe, okanye unosapho olukhulu olunokukunceda uqonde ukuba ungubani.
Yenza inqaku lokwazi abahlobo bakhe.
Buza ukuba yintoni ukutya okuthandayo, umbala owuthandayo, njl. Kunjalo, musa ukubuza malunga nazo zonke ezi zinto ngaxeshanye. Uya kufuna ukumazi kancinci okanye usenokubonakala ngathi uyisistcher.
Thatha ixesha lokujonga ngcono kunokuba ubuqhele ukwenza. Oku akuthethi ukuba kuya kufuneka uphume uye kuchitha itoni yemali kwi-wardrobe entsha okanye unxibe iimpahla ongaqhele ukuzinxiba. Kuthetha nje:
Qiniseka ukuba zonke iimpahla zicocekile kwaye azinakrazuka kunye neenyembezi.
Nxiba iimpahla ezitsha nezikhanyayo endaweni yokuthanda kakhulu.
Thatha ixesha elongezelelekileyo ngeenwele zakho.
Qiniseka ukuba ucocekile kwaye unuka kamnandi. Oku kunokubonakala ngathi kunikiwe, kodwa ngamanye amaxesha kulula ukuphazamiseka, ngakumbi ukuba udlala umdlalo ngokukhawuleza umbone emva komdlalo omkhulu. Thatha ixesha lokuba uhlambe ngokukhawuleza kwigumbi lokutshixa kwaye uya kwenza umbono ongcono.
Ukuba undinamaqhakuva, yiya kugqirha wesikhumba ukuze uyilawule. Ngelixa uninzi lolutsha luphuma kumabala, kunokukwenza uzive uzolile, kwaye kubalulekile ukuba uzive kwaye ujonge ukuzithemba.
Musa ukuhlamba kwi-cologne. Akukho mntu ufuna ukukrwitshwa xa unyuka kwilifu levumba elimnandi. Kananjalo, abanye abantu banovakalelo kwi-colognes kwaye inokwenza ukuba intombazana icatshukiswe xa ukuyo. Yinto yokugqibela oyifunayo!
Yithathele ingqalelo yakhe
Ngoku lixesha lokuba amqwalasele. Ufuna ukuba akuqaphele, kodwa awufuni kuza ngokungathandabuzekiyo.
Fumana ibhalansi phakathi kokumazi kwaye ungabahoyi abahlobo bakho. Xa umbona epasejini, hlukana nabahlobo bakho okomzuzu wokubulisa, kodwa balekani nibahlangabeze. Hlala naye kwindibano yesikolo, kodwa hlala nabahlobo bakho kumdlalo omkhulu.
Ukuba ubaleka kuye ethekweni okanye kumnyhadala wesikolo, ncuma ubulise. Musa ukoyika ukuncokola naye. Kuyanceda ukuba nemibuzo engqondweni ongathanda ukuyibuza yona, enjengokuba umntakwabo umntana unjani okanye ukuba iqela leqela elonwabileyo likulungele ukhuphiswano lwabo lokuqala.
Inyathelo lesibini: Mbonise ukuba uyakhathala
Nokuba uyakuqaphela, intombazana isenokungacingi ngawe njengendoda ethandana nayo kwangoko. Ukumenza ukuba acinge ngawe njengesoka elinokwenzeka, kuya kufuneka umbonise ukuba umkhathalele ngaloo ndlela.
Zama ukumncoma xa uqala ukumbona. Sukuba nexhala, awuzukubonakala ulungile xa unyanisekile kwaye ugcina izincomo zinengqiqo.
Kutheni umthanda nje? Ngaba uhleka kakhulu? Mxelele, 'Ndiyakuthanda ukuhleka kwakho.'
Ngaba ubonakala emhle namhlanje? Mxelele ukuba uqaphele ngokuthetha into enje, 'Ukhangeleka ulunge kakhulu namhlanje.' Awufuni kuza womelele ngeli nqanaba, ke unokufuna ukugcina amagama afana 'amahle' xa uthandana naye ngokwenene.
Amantombazana awamfuni umfana athandana naye kuphela kuba emhle okanye ethandwa. Xa uyamncoma, jolisa kwizinto ezinje ngobuntu bakhe okanye izinto azenzileyo.
Umntu olungileyo uhlala ephumelela
Kwiimuvi, ngamanye amaxesha amantombazana aya kwinkwenkwe embi, kodwa kubomi bokwenyani amantombazana afuna umfana obaphatha kakuhle. Gcina ezi zinto engqondweni:
Ukuba unodade, ungathanda ukuba umfana athandana naye amphathe njani?
Sebenzisa isimilo sakho. Xa udibana nabazali bakhe, bamba izandla, ubaxelele ukuba kumnandi ukudibana nabo uthi 'nceda' kwaye 'enkosi.'
Uhlafune uvale umlomo. Kulula ukungena kumkhwa wokutya ngokukhawuleza kwaye ungakhathazeki malunga nokuba umlomo wakho uvaliwe na, kodwa akukho ntombazana ifuna ukubona ukulunywa kwesiqingatha se-hamburger siqengqeleka emlonyeni womntu.
Amantombazana ayathanda xa ubabambele ucango, ngoko ke bamba ucango umyeke angene kwigumbi lokufundela okanye kwisikolo esiphambi kwakho.
Sukuthetha ngabanye abantu kwaye uzame ukunceda abanye. Amantombazana ngokubanzi afuna ukuthandana nomfana owaziwa njengolungileyo kuye wonke umntu.
Isitshixo kukwenza izinto ngentliziyo enyanisekileyo. Phuhlisa umoya womntu olungileyo nolungileyo, kwaye uya kutsala intombazana esemgangathweni ekwangumntu olungileyo.
Ulwimi lomzimba lubalulekile
Nika ingqalelo kulwimi lomzimba wakhe. Inokukunceda ukuba uqaphele ukuba ingaba uqala ukukuthanda ngaphezu komhlobo. Iimpawu zokuba angakuthanda ngaphezu komhlobo zibandakanya:
Ungqiyama ngeli xa uthetha.
Ujongana nawe, okanye umbambe ejonge kuwe.
Uhleka iziqhulo zakho, nditsho nezo zitshisayo.
Usenokubeka isandla sakhe engalweni okanye egxalabeni xa ethetha nawe.
Ewe, ezi zinto zinokuba ngumqondiso wobuhlobo, kodwa zibonisa ukuba ubuncinci bakufumanisa ungumntu othandekayo kwaye sisiqalo esihle eso.
indlela yokuphendula kwisimemo sodliwanondlebe
Menze Avakale Ekhethekileyo
Uye wabazi abahlobo bakhe kwaye wathetha naye eklasini. Ngoku lixesha lokuba simenze azive ekhethekileyo kwaye umazise ukuba unomdla kuye.
Mncedise. Phatha iincwadi zakhe uzise kwiklasi yakhe. Cela ukumnceda afunde uvavanyo olukhulu. Vula ilokhari yakhe xa esokola ukudibana.
Cela inombolo yakhe yefowuni kwaye umbhalele umyalezo ukuze umazise ukuba ucinga ngaye.
Thenga iilekese zakhe azithandayo kwaye uzise esikolweni.
Mncede ngento ethile. Ngaba ulungile ngesiNgesi kwaye awunjalo? Mbuze ukuba angakunceda na xa ufunda isiNgesi.
Ujonge ebusweni nasemehlweni akhe. Sukuvumela amehlo akho ukuba abhadule okanye akrokre ukuba unomdla kuphela kwizinto zomzimba hayi kuye njengomntu.
Mxelele ukuba uyavuya ukumbona okanye ukonwabele ukuthetha naye.
Emva kokuvalelisa emva kweklasi okanye omnye umsitho, linda okomzuzwana ixesha elide kunokuba ufuna ukumazisa ukuba uyathandabuza ukushiya icala lakhe.
Inyathelo 3: Buza uMhla
Amakhwenkwe amaninzi ayazibuza ukuba angabuza njani intombazana kwisikolo samabanga aphakathi. Nje ukuba umbambe kwaye uyazi ukuba unomdla, lixesha lokuba umcelengomhla. Gcina ukhumbula ukuba umhla unokuya kumdaniso wesikolo kunye, ukuxhoma kunye neqela labahlobo okanye umpheki wosapho endlwini yakho.
ithatha ixesha elingakanani i-oveni yokuzicoca
Jonga ukuba uyakuthanda na
Uninzi lwabafana lunoloyiko malunga nokubuza intombazana ngomhla. Kuthekani ukuba uthi hayi? Kuthekani ukuba uyahleka? Ungathini ukuba nabahlobo bakhe bayahleka? Isitshixo kukufumanisa ukuba uyakuthanda na. Ukuba ubonakala ngathi, yiya phambili ngaphandle kokucinga kakhulu. Eyona nto imbi inokwenzeka kukuba uyakuthi hayi. Uya kuhlala efuna ukuba ngabahlobo. Xa uyijonga ngoluhlobo, awunakuphulukana nokuninzi.
Jonga ulwimi lomzimba wakhe.
Ngaba uhlala ecaleni kwakho eklasini?
Ngaba unomdla kwizinto ozithandayo nangazithandiyo? Ngaba uyabuza malunga nosapho lwakho, umdla, izilwanyana zasekhaya?
Ukuba awukaqiniseki, ungaya kubudala obudala ubuye umhlobo wakho athethe nomhlobo wakhe ukuze abone ukuba ucinga ntoni ngawe. Incoko ihamba into enje. 'Hayi, Mary, ucinga ntoni uSarah ngomhlobo wam uJohnny?' Impendulo iza kukuxelela okuninzi, kuba unokuqiniseka ukuba uSara uxelele uMariya oko akucingayo. UMary uya kuphinda amncome uSarah ukuba umhlobo wakho ubuza kwaye oku kunokumlungiselela ukuba usenokucinga ngokumcela.
Buza iNdlela eyiyo
Uwenzile wonke lo msebenzi, into yokugqibela ofuna ukuyenza kukumenza angakhululeki xa umbuza. Isitshixo kukuyigcina iyinto eqhelekileyo, kodwa hayi kakhulu, okanye unokuphoswa kwindawo yomhlobo.
Ngaphambi kokuba umbuze, yenza isigqibo sokuba uza kuba nini kwaye nini umhla. Uyamazi, ke kufanele ukuba sele uyazi into abazali bakhe abaza kumvumela ukuba ayenze. Imihla yeqela, ukuxhonywa endlwini yakho okanye ukudibana nomdlalo zonke zizimvo ezilungileyo.
Cinga ngeshedyuli yakhe. Ukuba ukwibhendi, fumana umhlobo owahlukileyo kwibhendi kwaye ufumane ishedyuli yabo yokuziqhelanisa kunye nokhuphiswano kwaye uqiniseke ukuba ukhululekile ngalo mhla umbuza ngaphandle.
Sondela kuye xa eyedwa kwaye engangqongwe liqela labahlobo. Amantombazana ngamanye amaxesha azive engakhululekanga xa ebuzwa phambi kwabanye kwaye engaqinisekanga ukuba angaphendula athini.
Buza buqu. Sukuthumela umyalezo okanye umyalezo kwimidiya yoluntu. Mbonise ukuba unesibindi kwaye wahlukile kunabanye abantu phaya. Ewe kuyothusa, kodwa ungayenza. Thatha umoya kwaye uthethe amagama.
Ukuba uthi hayi, ubomi bakho buya kuqhubeka kwaye ngelixa bunokuhlaba, kuyakufika umhla xa unomdla kwintombazana eyahlukileyo.
Le nxalenye kufuneka ibe lula. Uyazi ukuba uyamthanda kwaye ucinga ukuba ukhethekile. Uyayazi into oza kuyicela ukuba iyenze, nini kwaye phi. Ngoku, konke okufuneka ukwenze kukucela. Yitsho into efana nale:
Molo, Sarah. Kudala sithetha kwaye ndicinga ukuba uyazi ukuba ndiyakuthanda. Ndifuna ukukubuza ukuba ungaya na kumdlalo bhanyabhanya (yongeza amanye amagama ukuba abazali bakho bafuna ukuthandana bengamaqela) ngoLwesithathu olandelayo ngo-6: 30 ukubona i-XYZ Movie. '
'Sarah, ndingavuya ukuba ungahamba nam siye kumdaniso wesikolo kwiiveki ezimbini njengomhla wam.'
'Yiza endlwini yam uzokupheka kulo Mgqibelo ngentsimbi yesibini kwaye masazane ngcono. Ingaba uthini?'
Le mizekelo ingentla ilula kwaye inqaku. Kucacile ukuba umbuza ngomhla kwaye hayi ukuba ujonge nje njengezihlobo. Kuya kufuneka uze nezona zinto zisebenza kakuhle kubuntu bakho, kodwa qiniseka ukuba umnika umsitho, umhla, ixesha kwaye ubiza ukuba ngumhla, ke yena ucacile kule nto uyicingayo.
Ungasabela njani xa esithi Hayi
Zilungiselele kwangaphambili ukuze athi hayi. Zininzi izizathu zokuba intombazana inokuthi hayi xa ibuzwa ngomhla, njenge:
Abazali bakhe abamvumeli ukuba athandane okwangoku.
Uthetha nomnye umfana sele.
Uyambamba kwaye akazi ukuba makathini.
Ufuna ukukwazi ngcono kuqala.
Akakuboni nje ukuba uyathandana kwaye usenokungaze akubone unjalo.
Musa ukulahla ithemba, nangona kunjalo. Ukuba uthi hayi, mxelele ukuba kulungile kodwa uya kuphinda ubuze kwakhona. Oku kumxelela ukuba usamthanda. Ukuba uthe hayi ngaso nasiphi na isizathu ngaphandle kokuba akakuthandi ngale ndlela, usenokuthi ewe kwixesha elizayo. Eyona meko imbi kakhulu, uya kuyivuyisa into yokuba uyamthanda kwaye ngethemba lokuba ungahlala ungabahlobo abalungileyo.
Inyathelo 4: Mcele ukuba abe yintombi yakho
Ukufumanisa ukuba ungayenza njani intombazana efana nawe kwisikolo esiphakathi linyathelo lokuqala, kodwa xa sele ukulungele, lixesha lokuba umcele ukuba abe yintombi yakho.
Ngaphambi kokuba ubuze
Kubafana besikolo esiphakathi abanomdla wokuba nentombi, kukho izinto oza kufuna ukuzijonga. Igama 'umhlobo' yinxalenye ebalulekileyo ye-equation. Ukuba lo mntu ayinguye umntu onokuzibona uchitha ixesha naye kwaye ungayonwabeli inkampani yakhe, isenokungabi lolona khetho lulungileyo kubudlelwane bezothando. Kuya kufuneka ukuba uqiniseke ukuba umazi kakuhle ngaphambi kokufudukela kubuhlobo ukuya ekuthandeni.
Ungayicela njani intombazana ukuba ibe ngumhlobo wakho oyintombazana
Ukuba umazi kwaye ufuna ukumcela ukuba abe yintombi yakho, eyona ndlela ilungileyo inyanisekileyo. Nangona kunzima ukuzibeka phaya, kuba kusoloko kukho ithuba lokuba omnye umntu akugatye njengeqabane lokuthandana, ngekhe uyazi impendulo ngaphandle kokuba ubuzile.
indlela yokubhala ileta yothando kumfana wakho
Xelela intombazana ukuba uyayithanda ngaphezu komhlobo.
Yiba nothando. Mnike iintyatyambo, umbhalele inqaku, umncome ngamazwi anyanisekileyo.
Mbuze ukuba angathanda ukuba yintombi yakho.
Ukuba intombazana ithi ewe kwaye iyavuma ukuba yintombi yakho, misani imigaqo eya kwenza ukuba imeko yokuthandana ikhululeke nobabini. Le mida iya kunikhusela nobabini ekulimaleni kwaye ikugcine ekungeneni kwimeko engathandekiyo ngoxinzelelo onokuthi ungakulungeli ukujongana nalo.
Phumani ngokwamaqela abahlobo kunokuba nichithe ixesha elininzi nodwa.
Hlanganisa namanye amakhaya kuphela xa kukho abanye abantu.
Vumelanani ukungadlali ngothando nabanye abantu. Oku kunokubonakala kucacile, kodwa njengabantu abancinci, kulula ukuphulukana nengqwalaselo. Into yokugqibela ofuna ukuyenza kukwenzakalisa omnye umntu kunye nokonakalisa ukuzithemba kwakhe.
Thetha nabazali bakho nabazali bakhe malunga nezikhokelo abacinga ukuba kufanele ukuba zibekho. Kuba awukaqhubi ngoku, kuya kufuneka uxhomekeke kubazali ngezothutho, ke kububulumko ukubabandakanya kule ncoko.
Iingcebiso zokufumana intombi kwi-Middle School
Ukufumana intombi kunokuba nzima kungekuphela kwabafundi abaphakathi kodwa kuyo yonke iminyaka. Ukuthetha naye kunokuba koyika ekuqaleni. Ukuzama ukufunda okanye ukuqonda imiqondiso yomzimba akunikayo kunokuba nokudideka ekuthetheni okuncinci. Funda ezinye iingcebiso kunye namacebo okuziva uzithembile, ukoyisa iintloni kunye nokufunda ukudlala ngothando.
Awuzalwanga usaziindlela yokudlala ngothando, kwaye ngakumbi kwabafundi abaphakathi, inokuziva ingonwabanga. Uncumo, ukubamba okungaqhelekanga kunye nokudibana kwamehlo kungathatha indlela ende ukuba ube yingcali yokudlala ngothando.
Musa ukuvumela iintloni ziphumelele
Kunzima ukuncoma ukutyumza kwakho ukuba kunzima ukuthetha naye. Kuba ukudlala ngothando kuninzi malunga nolwimi lomzimba,Ukoyisa iintlonikunokuba lula njengokumomotheka kunye nokuqinisekisa ukuba ujongeka uzithembile. Ukuba unengxaki yokuthetha naye, zama ukwazana nabahlobo bakhe. Oku kunokukunceda usondele kuye kwaye uzive ungabinantloni.
Khumbula i-90% yokuzithemba sisenzo. I-insides yakho inokuba ijikeleza njengenyoka kodwa ukuba uyigcina intloko, jonga amehlo kwaye uncume, abantu baya kucinga ukuba unokuzithemba. Thatha umoya omninzi kwaye ukholelwe kuwe. Kunokuba luncedo ukuzinika intetho encinci ngathi, 'Ndingayenza le nto.'
Ukucinga ngokuthetha nomntu otyumkileyo kunokukunika uxinzelelo. Awunyanzelekanga ukuba wenze yonke into ngaxeshanye. Khumbula ukuqala kancinci. Qala ngokuncoma okuncinci okanye uthi molo epasejini kwaye usebenze ngokwakho ukuya kwingxoxo. Oku kunokuqinisekisa ukuba awuzukukhathazeka kakhulu kwaye uxhalaba lwakho lukhulu kuwe.
Ngaba Uyayifuna Intombazana oyintombazana kwiSikolo esiPhakathi?
Abanye abantu banokuphikisa ukuba awuyidingi intombi kwisikolo esiphakathi, kodwa kwibakala lesixhenxe kunye nesibhozo uninzi lwabafundi lubonakala ngathi luyabhangqa. Umbuzo awunyani ukuba uyayifuna intombi kodwa ukuba ukulungele na ukuba nentombi.
amathuba okusweleka engozini yemoto
Ngaba ukulungele ukuyeka ixesha kunye nabahlobo bakho ukuba uchithe nentombazana?
Ngaba udlala imidlalo eliqela, okanye ubandakanyeka kwimisebenzi emininzi yesikolo kangangokuba ungafane uqhubeke nomsebenzi wakho wesikolo? Ukuthatha ixesha lokuba uhambe nentombi yakho kunokukuphazamisa kwaye amabakala akho anokubandezeleka.
Ngaba ulungele umdlalo weqonga ngamanye amaxesha oza nokuthandana?
Ngaba ukulungele ngokwasemoyeni ukubeka iimfuno zomnye umntu kuqala?
Abahlobo Ngubani Amantombazana
Kungenxa yokuba uninzi lwabanye abafundi banjaloUkudibanisa izibinioko akuthethi ukuba kuya kufuneka. Ukuba awukakulungeli, kuya kufuneka ulinde ukuba ube nentombi. Unayo yonkeisikolo esiphakamileyo,kwikholejinangaphaya kokuqalisa ubudlelwane nomntu wesini esahlukileyo. Ngamanye amaxesha, kungcono ukugcina izinto eziqhelekileyo kwaye ube nomhlobo osenyongweni okwenzeka ukuba abe yintombazana. Uyakwazi xa ixesha lilungile ukumenza, okanye enye intombazana, intombi yakho.
I-Trailer And Rv Camping Ukutya Kukhuseleko Ikati Ukufuya Ukutya Plans And Programs I-Antique Iglasi Ne China
omawukwenze xa indoda ekhulayo ingakuhoyi
indlela yokufumana kwakhona imiyalezo evela kwinombolo yefowuni endala
Iintsapho ezinomzali omnye zinokubandakanya abantwana bebhayoloji, abantwana bomtshato wesibini, kunye / okanye abantwana babamkele
izilwanyana ezincinci zokugcina ukutya ezithanda ukufunxwa